September 2014 - သန်လျင်သားနည်းပညာ
မင်္ဂလာပါ PDF ဖိုင်များကို View,Creat,Edit and Convert လုပ်ဘို့အတွက် Foxit PhantomPDF Business။လူသုံးအများဆုံး PDF ဆော့ဝဲတွေထဲမှာ တခုအပါအဝင်ြ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 12:28:00 No comments:
Android TeamViewer (ဆိုင်ရာ)
အားလုံးမင်္ဂလာပါနော် ခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ ကျွန်တော်တိုဖုန်းတွေမှာတစ်ခုခုဖြစ်နေလိုမလုပ်တက်မကိုင်တက်ဖြစ်နေရင် အဝေမှာနေတဲ့ဘော်ဘော်တွေကို အကူတောင...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 11:07:00 No comments:
Labels: Android TeamViewer (ဆိုင်ရာ)
အားလုံးမင်္ဂလာပါနော် ခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့နည်းပညာသမားတွေ အများဆုံးဆောင်ထားသင့်တဲ့ TeamViewer for Remote Control ပါကျွန်တော်တို့...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 10:44:00 No comments:
အားလုံးမင်္ဂလာပါ Android ဖုန်းတွေမှာ စစ်တိုက်တဲ့ game ကောင်းတစ်ခုပါ ဆော့ဖူးတဲ့ဘော်ဘော်တွေတော့ပြောစရာမလိုပါဘူး မဆော့ရသေးတဲ့ဘော်ဘော်တွေတော့ စမ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 10:16:00 No comments:
Uninstall Tool 3.3.3 Build 5321 Final-x86+x64 (10.8 Mb)
အားလုံးမင်္ဂလာပါ စက်မှာ အင်စတော လုပ်ပြီးသား မလိုချင်တော့တဲ့ ဆော့ဝဲတွေကို ပြန်လည် ထုတ်ပစ်ဘို့ Uninstaller ဆော့ဝဲလေး တခုပါ။ဒီဆော့ဝဲလေးရဲ့ ဒီဇိ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 09:53:00 No comments:
မင်္ဂလာပါဗျာ မောင်စေတနာ Bolg လေးကို လည်ပတ်နေကြသော သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့ ခင်ဗျာ... ကွန်ပျူတာ အခြေခံ နည်းပညာ ဆိုပြီး ပေးထားတဲ့ ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 11:06:00 No comments:
Labels: Computer (ဆိုင်ရာ)
CD/DVD Burnနည်း လမ်းညွှန်
CD/DVD ခွေဘယ်လို Burn မလဲ - အခွေမကူးတတ်သေးတဲ့ သူများအတွက် ခွေကူးနည်း လမ်းညွှန်
အစဉ်သဖြင့် ကျနော့် Blog လေးက မသိသေး၊ မလုပ်တတ်သေးတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အတွက် ဦးစားပေး၊ ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ.. အခြေခံနည်းပညာလေးတွေကိ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 10:58:00 No comments:
Labels: CD/DVD Burnနည်း လမ်းညွှန်
15 Aug 12, 05:37 PM မိုးဇော်: အစ်ကို ဘလော့ က ၀င်ဒိုး တင်ပုံတင်နည်းကို ကြည့်လုပ်လိုက်လို့ ပြီသွားပါပြီ . ခက်နေတာက driver ထည့်ကြည့...
Lockdown Pro – App Lock Version : 1.2.0 (All Andro...
Huawei ဖုန်းများအတွက် ROOT မလိုတဲ့ Myanmar Font AP...
Winamp PRO Full 5.65 Build 3438 + Serials (16.5 Mb...
Any Video Converter Ultimate + activation(34.3 Mb)...
ချမ်းမြေ့ဆရာတော် ဟောကြားတော်မူသော သစ္စာလေးပါး တရားေ...
Remote Control for TV Version : 1.4 (All Android )...